Facetune 2, fivoarana mivantana mankany amin'ny kitapom-bola | Vaovao IPhone
Facetune 2, fivoarana mivantana mankany amin'ny kitapom-bola
Carlos Sanchez | | Fampiharana iPhone, maro
Facetune dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo fampiharana izay no nahomby indrindra tao amin'ny App Store tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, satria nomeny safidy hanatsarana ireo sary nalaina niaraka tamin'ny iPhone tao anatin'ny segondra vitsivitsy tamin'ny fomba tena tsara tao anatin'ny segondra vitsy. Izao indray Lightricks dia miverina amin'ny fanontana faharoa izay mitondra fanatsarana mahafinaritra nefa tsy mahafinaritra ihany koa.
1 Ho tsara kokoa
Ho tsara kokoa
Ny fahatongavan'ilay fanontana fanontana faharoa an'ny Facetune dia miaraka amina endrika iray takian'ireo mpampiasa ny kinova voalohany, ary tsy iza izany fa ny fanovana mivantana. Izany hoe isaky ny manova ny famerenana isika dia ho hitantsika io fotoana io, fa tsy mila miandry akory maka sary ary noho izany dia miteraka fitsitsiana fotoana tena miavaka rehefa manao retouching marobe arakaraka ny fihetsika ao amin'ilay sary
Ny fanatsarana hafa miharihary amin'ny fampiharana dia ny toe-javatra vaovao (indrindra amin'ny hazavana maivana amin'ny sary) mamela antsika mandehana lavitra kokoa rehefa mitantana ny fisehoan'ny olona ampiasaintsika retouching. Ho fanampin'izany, Lightricks dia nanampy rafitra iray izay mamerina ny endrikay amin'ny 3D mba hahafahana manao fanovana tsy ho vita amin'ny ankamaroan'ny fampiharana hafa na amin'ny kalitao na amin'ny mazava.
Ary eo no niavian'ny olana, ary toerana nahatezitra ny mpampiasa. Raha tokony hanolotra rindranasa feno sy ny kojakoja rehetra amin'ny vidiny raikitra dia nifidy i Lightricks modely roa misaraka: Azontsika atao ny mividy ny touch-up tsirairay (miteraka volabe) na azontsika atao ny misoratra anarana amin'ilay fangatahana vidiny izay toa somary avo kokoa noho izay heverin'ny olona ho mitombina.
Ny famandrihana manome fidirana feno dia mankany amin'ny 1,99 euro isam-bolana, 9,99 euros isan-taona na 29,99 euro ho an'ny famandrihana mandritra ny androm-piainana, ny vidiny izay azo hamarinina nefa raha manaraka ny fironana mahazatra isika dia azo heverina ho avo dia avo. Ary zavatra tsy nodinihin'ireo mpampiasa izany, satria ny fanamarihana ilay fangatahana dia manangona ny hevitry ny kintana iray mitaraina momba ny maodelim-barotra vaovao napetrak'i Lightricks sy ny vidiny napetraky ny orinasa amin'ny fangatahana.
Ny tena izy dia rehefa manamboatra sary indray dia ity rindranasa ity tsy manana mpifaninana amin'ny lafiny ny tahan'ny hafainganana / valiny. Ny vidiny ho an'ny olona mampiasa azy kely dia mety ho be loatra, saingy marina fa raha ampiasainao hatrany amin'ny farany dia miresaka latsaky ny iray volana isam-bolana isika, izay toa mitombina.
Facetune2 avy amin'i Lightricksmaimaim-poana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Facetune 2, fivoarana mivantana mankany amin'ny kitapom-bola
Zexion dia hoy izy:
Mampihomehy ahy ny niarovanao izany zavatra izany. Tsy menatra izany! Ary tsy manisa ny olona rehetra efa nandoa ny kinova taloha. Miaraka amin'ny olona toa izany dia haneso antsika amin'ny fiainantsika rehetra izy ireo, mazava izany
Mamaly an'i Zexion
LaMetric, famantaranandro tsy manam-paharoa amin'ny sokajy misy azy